Ethandwa kakhulu uhlobo isikhunta kukhona ezweni lethu, yebo, amakhowe. Zikhula cishe kuyo yonke indawo, futhi ukunambitheka obucayi kanti iphunga yalolu hlobo kufanelekile ezihlukahlukene okujabulisa Culinary. Kodwa bewazi yini ukuthi kukhona mushroom ihlathi?
Njengoba isivakashi ezingavamile emahlathini zethu, khona kanye umsoco omele umbuso zamakhowe ezaziwayo ukuze ambalwa. Ngokuvamile, kungabonwa imiphetho coniferous futhi amahlathi okuxubile, emasimini ezisencane sonwele noma zikaphayini. Ubizwa ngokuvamile ezitholakale eduze anthills. Njengoba izintuthwane angasebenzisa ama-mycelium, kungenzeka ukuthi ihlathi amakhowe futhi baba izisulu yokudoba yabo. Isikhathi uma buvela eside ngokwanele - ngokuvamile amakhowe kuqala ukukhula ngoJulayi, bese, ngezikhawu amasonto amabili, olusha. Futhi zikhula nokuqala yesithwathwa ebusika.
Uyini umahluko endleleni evamile yokubalwa, ijwayelekile amehlo ethu, amakhowe asendle? Izithombe yaleli ukhunta e-encyclopedia ezikhethekile ibonisa ukuthi ukubukeka bona awafani. Ngokungafani kakhulu round, futhi nge unyawo ezibanzi obukhulu ezimhlophe noma sinombala cap, amakhowe ezivamile, champignon ugodo has a umlenze mncane eside, esakaza bonnet ububanzi ngamasentimitha 5 kuya ku-10. Kule nkathi emaphethelweni oyindilinga cap phansi bangaba ogobe phezulu. Umbala ngalokwanele ansundu yakhe, ekuqaleni kwawo-ukukhula refluent tinge Pinkish, kodwa njengoba yokuvuthwa Uthola luhlaza onsomi. cap Centre embozwe izikali.
Of yonke inhlobo yamakhowe ihlathi mushroom iyona okumnandi kakhulu. Kodwa inyama yakhe ezacile nokuthinta nesenzakalo ezingavamile amahlathi ethu cha enza it athandwa kakhulu emakhishini. Lokhu ukhunta akudingekile ukuba omisiwe noma anosawoti - yephunga layo ngokuthi untekenteke futhi ukunambitheka bushelelezi ngeke uzibandakanye zalezi zinhlobo workpieces. Indlela engcono ukupheka - bayobhaka noma yokuwugazinga ne ukwengeza ukhilimu omuncu noma u-anyanisi. Futhi, ungahlukumezi amakhowe ehlathini ukupheka izinongo - bangase ukubulala ukunambitheka izitsha.
Njengoba wazi, kukhona hhayi kuphela ezidliwayo, kodwa futhi okufanayo kubo engenakudliwa ngobubi bawo futhi amakhowe anobuthi. Ihlathi amakhowe ayizange iphumelele le ukudalelwa. Zingaba kudidaniswe esiyingozi toadstool okhanyayo, uma ungazi tricks kancane. Ngo lokuqoqa lezi isikhunta kubalulekile ukucabangela ngokucophelela ipuleti e phansi cap. Ngo toadstools zihlale omhlophe, kuyilapho ihlathi mushroom inama amapuleti pink, obomvu noma sinombala (kuye ngokuthi yobudala). Uma ipuleti uye sibe mnyama, okungukuthi, yebo, amakhowe, kodwa kungcono ukuba angadli. Lokhu umbala ibonisa ukuthi ukhunta esemdala kakhulu, ngakhoke asifanele ukudliwa.
ukwehluka fungal ngakolunye uhlangothi, usinika eziningi eziye zatholwa Culinary okujabulisa, futhi ngakolunye - kwandisa ingozi okunoshevu zinhlobo anobuthi. Uma ungeyena beqiniseka ikhono lazo ukuhlukanisa ehlathini ku emaphethelweni toadstool mushroom, kungcono engozini impilo yabo - ayeke okukhethayo ziyafuywa ngaphansi kwezimo yezimboni amakhowe abavamile. Futhi uma uthola injabulo kusukela ethule ukuzingela inqubo, qinisekisa ukubheka esikhathini sonwele leli khowe okumnandi futhi zibe nephunga elimnandi.
Sphagnum bogs - uhlobo ixhaphozi. Sphagnum Peat bog
Kusukela lokho kusiza "Spazmalgon"? "Spazmalgon" (amaphilisi, imijovo): imfundo, ukubuyekezwa kwesicelo
Izinkundla: inhlangano, indawo, ukuvikeleka
Kungani candy ujamu? Okufanele ukwenze ezimweni ezinjalo?
Gleb Stepanov - Biography futhi ekhonsathini imisebenzi
Yini imikhiqizo bayindlala kakhulu eRussia? Yikuphi umkhiqizo ithandwa kakhulu kuyi-Internet?
Tiramisu Homemade - a injabulo yasezulwini